Soo-saareyaasha Sahayda Dharka - Shiinaha Alaab-qeybiye Maryaha & Warshad
Ey Qoob-ka-ciyaarka Slicker burush Butros Deshedding Tool Dematting Comb
Miyaad wali ka walwalsan tahay timaha eeyahaaga meelkasta oo gurigaaga ka mid ah marka xilliyadu isbedelaan? Wali miyaad ka walwalsan tahay dhibaatooyinka ka soo baxa timaha sabaynaya ee ku dhajinaya shanlada?
Qalabka Ehed Deshedding Brush Brush Butros Irbade Bath Comb
Miyaad ka walwalsan tahay dhibaatada timaha eeyahaaga marka xilliyadu isbeddelaan? Miyaad ka walwalsan tahay timaha sabaynaya ee shanlada ku jira? Aynu kugula talineyno badhanka riixista ee buraashka xayawaanka xayawaanka ah. Kaliya hal riix ayaa xallin kara dhibaatadaada.
Xaydha ciddiyaha xayawaanka iyo Trimmer Dog Claw Cidiyaha Clippers
Astaamaha Sharaxaadda Markaan la adeegsan, gooyeyaasha ayaa lagu xidhi karaa iyadoo garbaha lagu haayo meesha xidhan. Astaantan nabadgelyadu waxay dammaanad ka qaadaysaa inaadan si shil ah naftaada u jarin markaad ka soo saareyso khaanadda, iyo in garbaha aysan waxyeello u geysan doonin ama aysan waxyeeleyn doonin waxyaabaha kale ee ay ku keydsan yihiin. Xakamaynta ergonomic ee leh xargo caag ah oo midab dhalaalaya oo isku xidhan ayaa loogu talagalay inay u oggolaato siibasho bilaash ah oo sifeyn ah oo xasiloon oo leh raaxada ugu badan. Waxaa lagu sameeyay bir bir ah oo aan heer sare lahayn, ...
Ey Arooska shanleyta Birta daadinta Burushka Diidmada Fur Rake
Astaamaha Sharaxa 1. Looma isticmaali karo oo keliya in loo qurxiyo si ammaan ah, sidoo kale waxay ku siin kartaa adeeg duugis ah, oo eygaaga ka dhigeysa inuu ku raaxeysto xoqidda, kordhinta wareegga dhiigga iyo ilaalinta eeyahaaga oo jilicsan oo dhalaalaya. Ilkaha qaabka wareega ah ayaa awood u leh inay si fiican u hagaajiyaan dharka hoosta iyaga oo aan si dhakhso leh u xoqin maqaarka eeygaaga. Shanlada eyga ayaa ku habboon eyga xayawaanka caadiga ah. Sida Loo Isticmaalo 1. Ka bilow shanleyda cirifka eeyga ilaa xididka wax yar. 2.Ha timaha si xoog ah uga bixin si aad uga fogaato sababaha ...
Ey Clippers Dog Iyo Trimmer Goo Ciddiyaha ciddiyaha File
Astaamaha Sharaxa 1. Dhageystayaashaani waxay ku habboon yihiin jarista inta yar yar ee xayawaanka guriga lagu haysto.Hayso xayawaankaaga ciddiyaha gaagaaban, yaraynta iyo dhibaatooyinka ka soo baxa ciddiyaha dhaadheer sida wasakhda oo kordha ama ciddiyo jajaban / jajaban oo u horseedi kara dhibaatooyin. 2.Ultra daab fiiqan, xoqin lahayn. Garbaha fiiqan ee kuyaala ciddiyaha eeyaha ayaa si nadiif ah u wada gooyay cidiyaha eeyaha, si siman oo dhakhso leh. Si raaxo leh oo ammaan ah u jar ciddiyahaaga xayawaanka daqiiqado gudahood. Xayawaankeena xayawaankeena xayawaanku waxay la yimaadaan difaac ...
Basaasida Eeyaha Caday Cadayasha Dharka Gacmo gashiyada Gashaanta
Astaamaha Sharaxaad 1. Waxay aad ugu fiican tahay eeyga oo dhan, Kaliya u salaax xayawaankaaga sidaad caadiyan ahaan lahayd, galoofku wuxuu soo qaadaa dhammaan timaha dabacsan! Sii xayawaankaaga timo nadiif ah adoo weli ilaalinaya gacmahaaga. 2. Ku maydh xayawaanada gacmo gashikan, kaas oo si fudud u nadiifin doona timaha xayawaanka isla markaana u siin doona xayawaankaaga duugis jilicsan adigoon wax yeeleynin maqaarkooda. Burushka duugista ah ee silikoonku ma caawin karo oo keliya xayawaanka inay timaha iska saaraan, laakiin sidoo kale waxay kor u qaadaan wareegga dhiigga. Waxay si fudud u tirtiraysaa timaha xayawaanka dabacsan iyo dhaldhalaalka si aan dhogor u f ...